GV Mpisolovava · Janoary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny GV Mpisolovava tamin'ny Janoary, 2014
Mediam-bahoaka23 Janoary 2014
Narindran'ny IFEX sy ny Electronic Frontier Foundation ary navoaka tao amin'ny Fihaonamben'ny Bilaogera Arabo tamin'ny 23 Janoary 2014 ity fanambaràna manaraka ity. Nandray fepetra henjana hampanginana izay rehetra mety ho endrika fivoriana, fikambanana na fanoherana virtoaly ny “governemanta vonjimaika” miaramila any Ejipta. Taorian'ny fahalanian'ny lalàna mandràra ny hetsi-panoherana am-pilaminana tamin'ny...
Syria21 Janoary 2014
Maro ireo mpomba ny WikiLeaks no tsy nanampò raha nihaona tamin'ny filohan'ny Syriana Bachar al-Assad ireo mpikambana ao amin'ny Antoko Wikileaks tamin'ny fiafaran'ny volana Desambra
Shily18 Janoary 2014
Ejipta18 Janoary 2014
Malezia18 Janoary 2014
Gazetiboky mpivoaka isan-kerinandro naato satria nitantara vaovao momba ny fandaniana mahazatra ataon'ny Praiminitra. Ho setrin'izany, nidina an-dalambe ireo mpanao gazety mba hiampanga ny sivana mihatra amin'ny fampahalalam-baovao.
Amin'ny Herinandro: Fihaonan'ny Arablaogera Faha-4 #AB14
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Janoary 2014
Hihaona ao Amman, Jordan ireo bilaogera, tekinisiana, mpikatroka sy mpandraharaha manerana ny faritra Afovoany-Atsinanana sy Afrika Avaratra amin'ny herinandro ambony ho fanatontosana ny Fihaonana Faha-efatra eo amin'ireo Bilaogera Arabo
Shina03 Janoary 2014